Iwe uchabika steak kusvika pakukwana nguva dzose neyi 69 $ - BGR - TELES RELAY
HOME » Deals Iwe uchabika steak kusvika pakukwana nguva dzose neyi 69 $ - BGR
Zvinonyatsoita kuti MEATER Original Wireless Smart Meat Thermometer MUTA ndicho chinhu chakanakisisa chakaitika mukicheni yangu kwemakore. Handigoni kunyatsofunga nezvechinhu chipi nechipi chakange chine simba rakanaka pakicheni yangu. Ichi chigadzirwa chikuru chinonamatira kune zvokudya zvako paunenge uchibika pane grill, muchoto kana kunyange mupupu. Inobatanidza nefoni yako uye inopa kuverenga kwemaawa-kutora, uye foni yako inokuchenesai iwe kana zvokudya zvasvika kune chaicho chaunoda kupisa. Mune mamwe mazwi, steak kana imwe nyama inobikwa kuti iite zvakakwana nguva dzose!
► 100% wireless: hapana wire. Kwete nyaya. Iko yekutanga isina tsvina isina njere nyama inopisa thermometer. Cherechedza mubiki wako achishandisa FREE FREE iripo paIOS (10.3 uye gare gare) / Android smartphones uye mahwendefa (5.0 uye gare gare).
► 2 sensors, sarum 1: Maviri ekushisa masero anoongorora mukati mekushisa kwe nyama kusvika ku 212 ° F uye kutaridzika kwemukati / kunze kwekunze kusvika ku 527 ° F.
► Guided Cooking System: Inokurongedza mumatanho ose ekugadzira kuve nekugutsikana nekugadzirisa. Iwe unogonawo kugadzirisa tsika dzesayenzi / mazaziso zvichienderana nekupisa uye / kana nguva.
► Ongororo yakadzama Algorithm: Inofungidzira kubika nekuzorora nguva yezvokudya zvako kuti ikubatsire kuronga zvokudya zvako nenguva yako.
► Kubatanidza Zvadaro: Tarisa kubika kwako kubva pane foni kana teretheni kuburikidza neBluetooth. Wedzera yako wireless range uchishandisa MEATER Link WiFi uye MEATER Cloud kushandisa Alexa uye uone mubiki wako kubva kombiyuta.
tevera @Bkuueals pa Twitter kuti uchengetedze iwe-kusvika-pane pane zvitsva uye zvekupedzisira zvakapiwa.
Kuti uwane zvakawanda pamusoro pezvipo zvedu uye zvakabhadharwa zvinopa, tapota tumira e-mail ku sponsorisé@bgr.com
Zvinyorwa zveBGR Deals zvakasununguka kubva kuHurongwa neKushambadzira, uye BGR inogona kuwana mutengo wekutenga kunoitwa kuburikidza nematanda edu.
Tenga iyo yose itsva yeGoogle Pixel 3a XL nhasi kuAmazon uye ugamuchire chipo chepachena chepachena kubva ku100 $ - BGR